RW Cabdiweli oo nabad ugu baaqay Puntland & Galmudug – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
RW Cabdiweli oo nabad ugu baaqay Puntland & Galmudug
A warsame 27 September 2014 28 September 2014
Mareeg.com: Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa maanta ugu baaqay maamulada Puntland iyo Galmudug inay wadahadal ku dhammeeyaan khilaafka duullimaadyada diyaaradaha ee Garoomada Gaalkacayo, isla-markaana laga fogaado wax kasta oo dhaawacaya nabadda iyo wada noolaanshaha dadka degaanka.
Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa sheegay in guddi wasiirro ah uu u xilsaaray inay ka hawlgalaan khilaafka Gaalkacyo, waxana guddigaasi uu xiriir la samaynayaa madaxda labada dhinac si loo debciyo xiisadda.
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa Puntland iyo Galmudug inay joojiyaan wax kasta oo keeni kara xiisad colaadeed;
In shuruud la’aan la fasaxo dhammaan adeegyada duulimaadyada ee degaankaasi;
In dhakhso la bilaabo wadahadal lagu dhammaynayo khilaafka garoomada;
Xukuumadda Federaalka waxay ballanqaadaysaa inay fududeyso qabsoomidda wadahadalka iyo dhamaystirka khilaafka labada dhinac;
Xukuumaddu waxay u dirtay labada maamul guddi khuburo ah oo kala shaqeeya arrimaha farsamo ee duullimaadyada.
Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa xiisad ka dhex aloosantay kadib markii Puntland xayiraad saartay garoon diyaaradeed oo maamulka Galmudug ka dhistay koonfurta Gaalkacyo.